WEST HIGHLAND WHITE TERRIER DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
West Highland White Terrier Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Cody the Westie oo jira 5 sano
Liiska West Highland White Terrier Mix Eeyaha Taranka
galbeedka HAHY-luhnd wahyt TAIR-ee-uhr
West Highland White Terrier, oo badanaa loogu yeero 'Westie', waa eey yar oo adag. Madaxa waa u dhigmo jirka oo marka xagga hore laga eego wuxuu bixiyaa muuqaal wareegsan. Xuubka afku waxyar ayuu ka gaaban yahay qalfoofka iyo taabashada sanka. Waxaa jira joogsi qeexan. Sanku waa madowyahay. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas qaniinyo leh ilko waaweyn oo u dhigma eyga. Indhaha yicibta u eg, qoto-dheer, indhaha madow ee mugdiga ah ayaa si ballaadhan loo kala saaray. Dhegaha waa kacsan yihiin, oo si ballaaran ayaa loo kala saaray madaxa dushiisa iyo qaab saddex geesood ah, oo u imanaya barta. Lugaha xoogaa way gaaban yihiin laakiin dhulka kama hooseeyaan. Dabada aan la furin waa mid gaaban, qiyaastii 5-6 inji (12.5-15 cm) dheer, dhumuc weyna salka salka ku haysa ilaa dhibic. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Jaakada laba-geesoodka ah waxay leedahay jaakad toosan oo adag oo dhererkeedu dhan yahay 2 inji (5 cm) iyo jaakad jilicsan oo cufan. Midabka jaakadu waa cadaan adag.
West Highland White Terrier waa ciyaar iyo Terrier yar oo adag oo fudud oo la tababaro. Caadi ahaan waa mid saaxiibtinimo u leh shisheeyaha wuxuuna si wanaagsan ula shaqeeyaa carruurta. Ey fudud oo lala safri karo. Eeyadan ayaa ah kuwo firfircoon oo aad isugu kalsoon oo u leh eeyaha kale, laakiin dagaal ma qaadi doonaan haddii milkiilayaashoodu garanayaan sida loo muujiyo hoggaan sax ah. Waxay u eryan karaan bisad madadaalo, waxayna u baahan yihiin in la saxo haddii ay tan isku dayaan. Adag, saaxiibtinimo iyo xamaasad leh, Westies kaliya waxay jecel yihiin wehel. In kasta oo ay cabbirkoodu sarreeyaan, waxay sameeyaan ilaalin aad u wanaagsan. Westie-ku waxay jeceshahay qodida iyo qodxodka Haddii Westie loo oggolaado inuu noqdo hogaamiyaha xirmada , waxaa laga yaabaa inuu si dhakhso leh u xanaaqo isla markaana uu la dagaallamo eeyaha kale. Hoggaan la'aan dhanka milkiilaha waxay sababi kartaa dhibaatooyin badan oo xagga dhaqanka ah, sida qaniinyada, ilaalinta cuntada iyo alaabta guriga . Westie leh milkiile garanaya sida loo muujiyo adkaysi, kalsooni, iswaafaqsan, hogaamin ma lahaan doono kuwan dhibaatooyinka habdhaqanka . Dhibaatooyinkaan waa la sixi karaa marka milkiilaha uu noqdo eeyga hogaamiye xirmo run ah . Ha u oggolaan in Westie uu horumariyo Cudurka Dog yar .
Dhererka: Ragga 10 - 12 inji (25 - 30 cm) Dumarka 9 - 11 inji (23 - 28 cm)
Miisaanka: Ragga 15 - 22 rodol (7 - 10 kg) Dumarka 13 - 16 rodol (6 - 7 kg)
U nugul hernias joogto ah, cudurka beerka ee Legg-Cavé-Perthes syndrome (dhibaatooyinka sinta), calcification daanka lafdhabarta, isha cherry iyo dhibaatooyinka maqaarka.
West Highland White Terriers waxay ku habboon yihiin dadka ku nool magaalooyinka iyo magaalooyinka iyo sidoo kale waddanka. Iyagu gudaha ayay aad ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
Eeyadan yaryar ayaa u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeleysaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida barxad weyn oo ood leh.
Jaakad adag, toosan, gaagaaban oo jilicsan ayaa si fudud u fududahay in la hagaajiyo oo wax yar oo timo la'aan ah ayey daadisaa Si fudud si joogto ah ugu caday burush adag oo adag. Cadayashada waa inay ilaalisaa jaakad nadiif ah, markaa maydh kaliya markay lagama maarmaan tahay. Ku wareeji dhegaha iyo indhaha maqas aan afka lahayn. Koodhka oo dhan waa in la jarjaro afartii biloodba mar oo sanadkiiba laba jeer laga gooyaa.
West Highland White Terrier wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Poltalloch, Scotland, waxaana mar loo yaqaanay Poltalloch Terrier markii dambena waxaa loo bixiyay Roseneath Terrier, oo loogu magac daray Duke of Argyll's estate. Noocani wuxuu yimid badhtamihii qarnigii 19-aad markii isir Scottish ah ka mid ahaa Cairn Terrier buuqday qaar ka mid ah cunnooyinka cadcad qashinkiisa. Ciyaalkaas waxaa loo xushay loona soocay si ay u helaan West Highland White Terrier, taas oo si fudud u ah Cairn cad. West Highland waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay USA 1906 oo markii ugu horreysay la aqoonsaday AKC 1908. 1909-kii ayaa magaca isirka laga beddelay Roseneath Terrier loona beddelay West Highland White Terrier. Sida Cairn, Westie waxaa asal ahaan loo soo saaray xakamaynta tirada jiirka, dawacada, badger, otter iyo xayawaano kale.
Brody qaangaarka West Highland White Terrier
'Oscar waa Westie (West Highland Terrier). Sawirkan waa 6 bilood. Oscar ma daadiyo, wuxuu jecel yahay inuu la ciyaaro eeyaha kale gabi ahaanba waa cabsi la'aan. Madadaalo uu ugu jecel yahay waa cunista cayayaanka - oo ay ku jiraan shinnida, oo uu soo qabto oo uu soo tufo. Isagu aad buu ugu jilicsan yahay terrier wuxuuna jecel yahay inuu nala sasabo. Ey yar (20 rodol) oo leh shakhsiyad weyn! '
Madison Westie Wanaagsan
West Highland White Terriers Susie (bidix) 12 sano jir iyo Rosie (midig) 9 sano jir
Brody the Westie sittin ’qurux badan!
Brody the Westie socda socod
WHWT saldhigga taranka, keynta Al-Moktar, sawir qadarin leh Lekesova
Figo, oo ah 4 jir Westie ah ayaa inbadan la safray milkiilayaashiisa. Wuxuu ku dhashay Slovakia, wuxuu ku noolaa Austria iyo Masar, hadana wuxuu ku nool yahay Ireland!
iskudhafka weyn ee schnauzer eeyo yaryar oo iib ah
Tani waa Grace, oo ah 2-bilood jir Westie eey ah oo degan Griiga.
Eeg tusaalooyin badan oo West Terland White Terrier
West Highland Sawirada Terrier-ka Cad 1
West Highland White Terrier Sawirada 2
West Highland White Terrier Sawirada 3
West Highland White Terrier Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
iskudhafka buluugga iyo buluuga cidhibta
sawirrada Terrier of pitbull
dane weyn oo indho buluug ah leh
waxa eey leeyihiin afafka madow